Lapho i-Google Drayivu iqalelwa kuqala, yenze njengendawo yokulanda nokugcina amafayela "ku-Cloud" ukuze ifinyeleleke kunoma iyiphi i-PC. Ngokuhamba kwesikhathi, njengoba ubuchwepheshe buguqukile, isevisi ye-Google Amadokhumenti ivele, manje isebenza njengehabhu lokudala amadokhumenti namathuluzi ehhovisi. Namhlanje ungafaka ngisho nokufaka izicelo kuDrayivu ukuze wandise ukusebenza kwayo nakakhulu. Ukuthola okuningi kunsizakalo, udinga ukwazi ngokuningiliziwe ukuthi yikuphi "iGoogle Disk" nokuthi uyayisebenzisa kanjani.
Okokuqala, udinga ukuyilungisa. Ngena ngemvume kwiwebhusayithi ye-Google Drayivu usebenzisa i-Akhawunti yakho yakwa-Google. Uma ungenayo i-akhawunti, ungayidala mahhala. "I-Google Disk" inikeza amandla okugcina amafayela "ku-Cloud", nangokusebenzisa isikhombimsebenzisi sewebhu ukudala amadokhumenti namafomu.
Layisha amafayela ku- "Google Drayivu". Ungayisebenzisa kanjani ukulanda? Kunezindlela ezimbili zokwenza lokhu. Ungakha amadokhumenti ku-Google Drayivu ngqo noma ulande amafayela kusuka ku-PC yakho. Ukwakha ifayela elisha, chofoza inkinobho entsha. Ukulanda kusuka kudivayisi, cindezela inkinobho ye-Up Arrow eceleni kwenkinobho yokudala.
Khetha ukuthi ufuna amafayela akho aboniswe kanjani. Ungabona ngezimpawu ezinkulu (igridi) noma njengohlu (ishidi). Imodi yohlu luzokubonisa igama lwedokhumenti ngayinye nosuku nesikhathi lapho lushintshiwe khona. Imodi yegridi izobonisa ifayela ngalinye njengokubuka kuqala kwekhasi layo lokuqala. Ungashintsha imodi ngokuchofoza inkinobho eduze kwesithonjana segiya ekona elingenhla lekhasi ngakwesokudla.
Indlela yokusebenzisa i- "Google Drayivu" kwikhompyutha yakho? Ukusebenzisa ibha lokuhambisa ngakwesokunxele, ungadlulisa amehlo kumafayela. Into yemenyu "IDrayivu yami" yindawo lapho wonke amadokhumenti akho namafayela akho alondoloziwe agcinwa nganoma yimaphi amasethingi. "Ukukwabelana" kuqukethe amafayela abelwe nawe ngabanye abasebenzisi "i-Google Drayivu." "Amathegi" yizincwadi ozibonile njengezibalulekile.
Ungathumela amafayela namafolda ku- "Google Drive" ukuze uwahlele ngokuqonda kwakho.
"Google Disk": kanjani ukusebenzisa amafayela?
Khetha ibhokisi lokuhlola ukuze ukhethe amadokhumenti amaningi. Emva kwalokho, izenzo ezihlukahlukene zamafayela akhethiwe zizotholakala kuwe. Uma usebenzisa ukubukeka kwezithonjana ezinkulu, i-checkmark ivela uma uhambisa igundane phezu kwedokhumenti. Izinketho ezingaphezulu zingatholakala kumenyu "Okuthuthukisiwe".
Chofoza isithonjana sefolda esimakwe "+" ukwakha ifolda entsha kuDrayivu. Ungakha izinkomba ngaphakathi kwabanye ukuhlela amafayela.
Ungasesha ngokusebenzisa amadokhumenti akho namafolda usebenzisa ibha yokusesha phezulu ekhasini le-Google Drayivu ngakwesokudla. "I-Google Drive" izosesha ngezihloko, okuqukethwe nabanikazi.
Idatha yokugcina idatha "Google Drayivu": indlela yokusebenzisa efonini?
Uma ufuna ukusebenzisa isevisi kudivayisi yakho yeselula, kukhona uhlelo lokusebenza lwe-Google Drayivu ye-iOS ne-Android, enikezela ukufinyelela kumafayela kusuka ku-smartphone noma ithebhulethi yakho. Ungayilanda mahhala kusuka esitolo esitholakala ku-intanethi. Noma kunjalo, izinsizakalo ezinjalo zingase zingabi nokusebenza okuphelele kokuhlelwa, ngokuyincike kuncike kunguqulo yesiphequluli. Ungakwazi kalula ukuthola indlela yokusebenzisa i- "Google Disk" ku- "Android", ngoba imenyu ifana nekhompyutha eyodwa.
Ungaqala kanjani ukusebenza namadokhumenti?
Chofoza inkinobho ethi "Okusha". Uzobona imenyu ekunika ilungelo lokukhetha ukuthi yimaphi amadokhumenti ofuna ukuwadala ku "Google Disk." Ungasebenzisa kanjani izinhlobo zefayela ezikhona? Uhlinzekwa ngezinketho eziningi ngokuzenzakalelayo, okunye ongayengeza ngokuchofoza isixhumanisi esifanele kwimenyu:
"Ifolda" - yenza ifolda kuDrayivu yami ukuhlela idatha.
"Idokhumenti" - ivula idokhumenti yombhalo. Ungenza ukufometha nokulungisa ikhasi usebenzisa amathuluzi akhiwe phezulu. Kungenzeka ukuthekelisa idatha ku-Microsoft Word, OpenOffice, PDF kanye nezinye izinhlobo zezinhlelo.
"Isethulo" - sikisela ukugijima okulingana ne-Microsoft PowerPoint. Idatha ingathunyelwa kumafomethi ahlukahlukene: Microsoft PowerPoint, PDF, JPG nokunye.
"I-Spreadsheet" - inikeza itafula elingenalutho. Idatha ingathunyelwa ku-Microsoft Excel, PDF, CSV, OpenOffice namafomethi afanayo.
"Ifomu" - likuvumela ukuba usebenze namafomu ongawagcwalisa ku-Intanethi. Zingathunyelwa kumafayela we-CSV.
Idala ifayela ku-Google Drayivu
Ngemva kokukhetha uhlobo lwedokhumenti, uzovula ifayela elingenalutho. Uma ukhethe "I-Presentation" noma "Ifomu", izilungiselelo zohlelo lokusebenza lwe-wizard zizovuleka, ezokusiza ekusetheleni idokhumenti entsha.
Phezulu kwekhasi, chofoza umbhalo ompunga "Uhlobo . I-"Qamba kabusha idokhumenti" iwindi ibonakala, okukuvumela ukuba ushintshe igama lefayela.
Qala umsebenzi ngedokhumenti. I-Google Drayivu inemisebenzi eminingi eyisisekelo, kodwa amasevisi ethuthukile angeke atholakale. Idokhumenti igcinwa ngokuzenzekelayo lapho umsebenzi uqhubeka.
Uma ufuna ifayela lakho lihambisane nezinhlelo ezifanayo, vula imenyu ethi "Ifayela" bese uthola "Landa njengoba". Imenyu izovela ukunikeza amafomethi atholakalayo. Yenza okulungile. Uyothunyelwa ukuba ufake igama lefayela bese ukhetha indawo ozoyilayisha. Lapho idokhumenti ilandwa, izonikezwa ngesakhiwo osikhethile.
Ngabelana kanjani nedokhumenti?
Chofoza "Ifayela" futhi "Yabelana", noma uchofoze inkinobho ebomvu ehambisanayo phezulu ngakwesokudla ukuvula izilungiselelo ezijwayelekile. Ungacacisa ukuthi ubani ongabuka ifayela, futhi ubani ongayilungisa.
Kopisha isixhumanisi phezulu kwedokhumenti yokudlulisela kubasebenzisi ofuna ukwabelana nabo. Ungasebenzisa izinkinobho ezingezansi ukuze wabelane ngokushesha nge-Gmail, Google+, Facebook noma Twitter.
Shintsha izilungiselelo zokufinyelela kudokhumenti kungenziwa ngokuchofoza inkinobho ethi "Shintsha ...". Ngokuzenzakalelayo, ifayela liyimfihlo, futhi kufanele umeme abasebenzisi ukuba bafinyelele kuso. Ungashintsha lezi zindlela ukuvumela ukuthi zibukwe wonke umuntu.
Ukuze ushicilele idokhumenti, isethulo, noma ispredishithi, chofoza ifayela bese ukhetha Shicilela ku-Intanethi. Lokhu kusebenza kudala ikhophi yefayela ukuthi ubani angayibona. Iba ikhasi elihlukile lewebhu elingahlobene nombhalo wakho womthombo. Lokhu kukuvumela ukuba wabelane ngolwazi nomuntu ngaphandle kokushintsha izilungiselelo zokwabelana.
Idokhumenti eshicilelwe ayikwazi ukuguqulwa. Ungakwazi ukuhlela kuphela ifayela lomthombo, elihlala "ku-Google Drayivu". Indlela yokusebenzisa izilungiselelo ichazwa ngenhla.
Uma unephrinta efakwe noma ufinyelela iphrinta ye-Google Cloud, ungaphrinta amadokhumenti. Chofoza ku "Imenyu" imenyu bese ukhetha "Phrinta" kusuka phansi ohlwini. Ungacacisa ukuthi yimaphi amakhasi okuphrinta, futhi udale isakhiwo sekhasi.
Ukubuka kuqala kuzovuleka ngemuva kokuchofoza inkinobho ethi "Phrinta", futhi ungakhetha iphrinta yakho ngokuchofoza inkinobho ethi "Hlela". Lokhu kungasiza uma uzama ukuthola iphrinta ye-Google Cloud kusuka kwenye indawo.
I-Rollback kwenguqulo endala yedokhumenti
Uma wenza izinguquko eziningi kule dokhumenti futhi wazi ukuthi udinga ukubuyela kunguqulo yakudala, ungasebenzisa ithuluzi lomlando ukubuka amakhophi amadala. Vula idokhumenti bese ukhetha "Ifayela" kusuka kwimenyu. Chofoza ku- "Buka umlando wokuguqula", bese ibhokisi lizovela ngohlu lokuhlelwa kwakho ngakwesokudla kwekhasi.
Ungachofoza kunombolo ngayinye yokushintsha kuhlu futhi ubuke ifayela. Uma uthola ikhophi endala ofuna ukuyisindisa, chofoza okuthi "Buyisela le thuluzi".
Landa ukuvumelanisa kwe-Google Drayivu kwikhompyutha yakho
Njengoba ubona, imfundo yokuthi yikuphi "iGoogle Drayivu" nokuthi ingayisebenzisa kanjani, ayikho into eyinkimbinkimbi. Uma ufuna, ungavumelanisa futhi amafayela wakho wendawo nge-Google Drayivu. Uma ufuna ukufaka uhlelo olunjalo, chofoza isixhumanisi esisekhasini eliyinhloko "i-Google Drayivu".
Ngemva kokulanda uhlelo lokusebenza, faka bese ungena ku-akhawunti yakho yakwa-Google. Ifolda izobekwa kwideskithophu, izokunika ukufinyelela okusheshayo kuwo wonke amafayela we-Google Drayivu. Hudula noma yimaphi amafayela ofuna ukuwafaka esitolo sakho se-Google Drive kuwo, futhi azolayishwa ngokuzenzakalelayo. Uma idokhumenti ilayishwe ngempumelelo, ibonisa uphawu lokuhlola oluhlaza okwesibhakabhaka.
Isobho kanye iphalishi "Zatiruha": iresiphi ekhaya
Izindlela Physico-chemical sokuhlaziya
Pension "Marco Polo" (Issyk-Kul): Ukubuyekeza, amanani
Kungani ukuvikelwa umbani kwezakhiwo kanjalo nezinhlaka